Aluminium Perforated Plate Factory - China Aluminium Perforated Plate Manufacturers, abahlinzeki
Pure Aluminium Ishidi
Ngenxa yezinto ezihlukile zokusetshenziswa kwamapuleti e-aluminium, ipuleti le-aluminium sheet lingahlukaniswa cishe libe yiphepha le-aluminium elihlanzekile ne-aluminium alloy plate. Kunamabanga ayi-8 e-aluminium plate, ibanga lokuqala yishidi le-aluminium elimsulwa kanti amanye amamaki ama-3 ayi-aluminium alloy plate. Izinto zepuleti ye-Aluminium yehlukile, impahla, umsebenzi nezinye izinto ezihlukile.
Ishidi le-Aluminium elihlobisayo
I-aluminium sheet plate isetshenziswa kabanzi, kufaka phakathi izimboni ezahlukahlukene emphakathini wethu. Ipuleti elijwayelekile le-aluminium alloy ngokusebenzisa ukucubungula okuthile okulula, kungadlala indima ebanzi kakhulu. Ipuleti le-aluminium elihlobisayo uhlobo oluthandwa kakhulu ngabantu.
I-Aluminium Sheet Perforated ilula ukwedlula insimbi engagqwali nensimbi engagqwali ishidi elibunjiwe, ngenkathi ihlinzeka ukumelana nokugqwala okuhle, ukuqina nokuqina. Ishidi elibunjiwe le-Aluminium liyatholakala ngosayizi ohlukahlukene wembobo, izingqinamba nosayizi weshidi.
Aluminium Uju Ishidi
Ishidi lezinyosi le-Aluminium lingenye ishidi le-aluminium elihlanganisiwe elidumile. Ibhodi lezinyosi le-aluminium liyishidi elihlanganisiwe le-aluminium elinomgogodla wezinyosi ze-aluminium. Okokusebenza kwamapaneli oju lwezinyosi lwe-aluminium ikakhulukazi i-aluminium alloy 3003 noma i-5000 series aluminium.